Panasonic Varicam 35 နှင့် Varicam HS တို့သည် Cine Gear Expo မတိုင်မီ Abelcine LA နှင့် VTP Burbank တို့တွင် 'Tour' ရပ်နားရန် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
Tlalnewood မှ Estudios GGM သည်အသံအဆင့်အသစ်သုံးခုကိုဖွင့်လှစ်တော့မည်
LiveU သည် LU800 ကိုပထမဆုံးထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ကွင်းဆင်းဌာနကိုစတင်သည်
Erik“ Blu2th” Griggs သည် KRK Systems နှင့်သူ၏အရောအနှောများကိုအနက်ရောင်ကြားရသည်
Mo-Sys သည် U50 UXNUMX Remote Camera Control Head Box ကိုမှန်ဘီလူးများအတွက်တပ်ဆင်သည်
DigiCAP Phoenix Model Market Advance ATSC 3.0 ဂီယာနည်းပညာကိုကူညီပါ
Intinor သည် JB&A နှင့် NewTek မှတစ်ဆင့်အမေရိကန်အသံလွှင့်လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်သည်
Sennheiser သည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ SpeechLine Multi-Channel Receiver ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Panasonic က Varicam 35 ပြီးတော့ Varicam HS Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲကြိုတင် Abelcine LA ကထိုအ VTP Burbank မှာ '' ခရီးစဉ် 'ရပ်တန့်ဖို့အတွက်
Panasonic က Varicam 35 ပြီးတော့ Varicam HS Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲကြိုတင် Abelcine LA ကထိုအ VTP Burbank မှာ '' ခရီးစဉ် 'ရပ်တန့်ဖို့အတွက်
Newark, NJ - Panasonic က၎င်း၏အသစ်အ VariCam 35 နှင့် VariCam HS ကင်မရာများမှာအစမ်းကြည့်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ် AbelCine ဇွန်လအစောပိုင်းအတွင်း LA ကနှင့် VTP Burbank တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားရိုက်ကူးရေး Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲ၏ကြိုတင်မဲအတွက်မော်ဒယ်သစ်ကိုမြင်ရဖို့အခွင့်အလမ်း affording ။
အဆိုပါ VariCam 35 အသစ်-ဖွံ့ဖြိုးစူပါထည့်သွင်းလူငယ်ကဏ္ဍရှိုးများမကြာသေးမီအမျိုးသားအစည်းအရုံးမှာစက်မှုလုပ်ငန်းဂုဏ်ထူး၏ဆုရရှိသူ 35mm ထိပ်တန်း 4K များအတွက် MOS image sensor ကို, UHD, 2K နှင့် HD ဝယ်ယူခြင်း,2/3"VariCam HS အရှိဆုံးတောင်းဆိုမှုများမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, အားကစားသို့မဟုတ်လို့လည်းသိကြပါတယ် Slow-motion application များအတွက် 1080fps မှတက်၏မြန်နှုန်းမြင့် 240p ပုံရိပ်ဖမ်းယူခြင်း features နေစဉ်။
အဆိုပါ AbelCine အဖြစ်အပျက် 3-1 (4), 801 တောင်ပိုင်း Main Street မှာတည်ရှိပါတယ်ရုံးများမှာ 888 နှင့် 700 ညနေအကြားဇွန်လ 4416, အင်္ဂါနေ့ Burbank ကျင်းပပါလိမ့်မည်။4ညနေ, 1 ဒဗလျူ Magnolia Blvd. မှာတည်ရှိပါတယ်နေရာ, Burbank, (30) 2721-818: အဆိုပါ VTP သရုပ်ပြဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇွန်လ 566, မွန်းတည်-9898 ဘို့စီစဉ်ထားသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Panasonic က (Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲမှာကတခြားဝန်ကြီးချုပ်ရုပ်ရှင်ပညာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံး VariCams ပြနေသည်www.cinegear.com), သောကြာနေ့, ဇွန်လ6နှင့်စနေနေ့, ဇွန်လ 7, Paramount မှာစတူဒီယိုမှာတဲ S226, ဟောလိဝုဒ်.
Panasonic ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုအားထုတ်ကုန်အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, ခရီးစဉ်ကို www.panasonic.com/broadcast.
စီးပွားရေးအဘို့အ Panasonic ကဖြေရှင်းနည်း
Panasonic ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည် '' Customer များအတွက်ပိုကောင်းoutcomesâ€ "မောင်းထုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများနှင့်အတူဒေတာချိတ်ဆက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနည်းပညာဖြေရှင်းချက်ကယ်တင်တတ်၏။ Panasonic ကအင်ဂျင်နီယာများအားလုံးအမျိုးအစားများဒေတာ, ဖန်တီးဖမ်းယူကယ်နှုတ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ, ဘယ်မှာအခါနှင့်ဘယ်လိုလိုအပ်ပါသည်။ အားလုံးအရွယ်အစား၏အစိုးရနှင့်စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းတွေများအတွက် Panasonic ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြေရှင်းချက်၏ပြီးပြည့်စုံသော suite ကိုစုစည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ရေး, မိုဘိုင်းကွန်ပျူတာ, လုံခြုံရေးနှင့်စောင့်ကြည့်အမှာစကား, လက်လီ Point-of-Sale, ရုံးကုန်ထုတ်စွမ်းအား, အမြင်အာရုံဆက်သွယ်ရေး (ပရိုဂျက်, display တွေ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်) နှင့် HD ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှု။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Panasonic ကဖြေရှင်းချက်မြောက်အမေရိက၏ Panasonic က System ကိုဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ, မြောက်အမေရိက၏ Panasonic ကကော်ပိုရေးရှင်း, Panasonic က Corporation ၏ကျောင်းအုပ်ကြီးမြောက်အမေရိကလက်အောက်ခံ၏ဌာနခွဲကပေးပို့တဲ့နေကြသည်။
အားလုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကုမ္ပဏီ / ထုတ်ကုန်အမည်များအမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေရဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ အားလုံးသတ်မှတ်ချက်များအသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Panasonic ကဖြေရှင်းချက်အပေါ်ပြန်ကြားရေး 877-803-8492 ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ်မှာရရှိသောနိုင်ပါသည် us.panasonic.com/business-solutions.
မြောက်အမေရိက၏ Panasonic ကကော်ပိုရေးရှင်းအကြောင်း
မြောက်အမေရိက၏ Panasonic ကကော်ပိုရေးရှင်းစားသုံးသူ, စီးပွားရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးဖို့အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်အခြားအီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျယ်ပြန့်လိုင်းပေးပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအိုဆာကာ, ဂျပန်-based Panasonic က Corporation ၏ကျောင်းအုပ်ကြီးမြောက်အမေရိကလက်အောက်ခံနှင့်များ၏အချက်အချာဖြစ်ပါသည်
Panasonic ကယ့်အမေရိကန်အမှတ်တံဆိပ်, စျေးကွက်, အရောင်း, ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ R & D ကိုစစ်ဆင်ရေး။ Interbrand ရဲ့ 2013 အတွက်
နှစ်စဉ် "အကောင်းဆုံးကို Global အစိမ်းရောင်အမှတ်တံဆိပ်" အစီရင်ခံစာ, အ Panasonic ကအမှတ်တံဆိပ်အဆင့်အရေအတွက်ကိုလေး, အစီရင်ခံစာအတွက်အမြင့်မားဆုံးအဆင့်အီလက်ထရွန်းနစ်အမှတ်တံဆိပ် (bit.ly/17ezCDI) ။ ရေရှည်တည်တံ့မှုအားထုတ်မှုဆက်လက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်မြောက်အမေရိက၏ Panasonic ကကော်ပိုရေးရှင်း Newark အတွက် Newark Penn ဘူတာကပ်လျက် Leeds လက်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန် built အသစ်တစ်ခုကိုစက်ရုံ, NJ ရန်၎င်း၏ဌာနချုပ်ပြောင်းရွှေ့။ Panasonic ကမှာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ www.panasonic.com.
AbelCine LA က အသံလွှင်း Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲ Panasonic က Varicam Varicam 35 Varicam HS 2014-05-29
ယခင်: Adobe ကနှင့် The မေလအယ်ဒီတာ့ Lounge မှာနယူး Lumberjack စနစ်ကနေနောက်ဆုံးရတည်းဖြတ်ခြင်း Tools များ
နောက်တစ်ခု: အဆိုပါ 2014 ကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံ (SM) မှာမီဒီယာ Workflows များအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်သိုလှောင်